Mootummaa Lammii Hiraarsu Deeggaruun Seexaa Namummaa Dhabuudha!
Date: May 20, 2012Author: Oromedia 0 Comments
(Oromedia, Caamsaa 20,2012) Mootumman Itoophiyaa mootummaa nagaa fi tasgabbii fiduu dadhabe waan ta’eef deeggarsi kennamuuf irraa dhaabbachuu akka qabu Waldaan Hawaasa Oromoo Melboune Kibba Bahaa gaafate.
Keessaayyuu, gaaffi ummata Oromoo ukkaamsuuf shira addaddaa tolchee ummata Oromoo humna jilbeeffachiisuu fi hakra kennachiisuuf yakka sanyii balleessaa Oromoo irratti raawwataa akka jiru kan ibse xalayaan Waldaa Hawaasa Oromoo kun, mootummaa lammii isaaf hin yaadneef deeggarsi godhamu fudhatama hin qabu. Kanneen deeggarsa kennanis, kanneen seexaa namummaa hin qabnee dha.
Kanaaf, qaamoti mirga dhala namoomaaf falman mootummaan Itoophiyaa sababa amantii, ilaalchaa fi gaaffii mirgaatiin cunuqrsaa ummta irraan gahu akka dhaabuuf dhiibbaa barbaachisu akka fudhatu SERMOCAVAn gaafatee jira.
Previous Previous post: Guyyaan Gootota Oromoo Mallattoo Oromummaa ti!
Next Next post: Mallas Zeenaawwii waltajjii wabii nyaata addunyaa irratti salphifame!